July 2010 | Knownledge
Posted by ZawKhar On Tuesday, July 27, 20100comments
Download Software Part (1) , Part (2)
Teach Yourself The Best Technology and Repairing PCs (E-Book)
Posted by ZawKhar On Monday, July 26, 20100comments
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆရာဦးအေးကိုကို ရေးသားတဲ့ အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းအခြေခံနည်းစနစ်နှင့်တကယ့်လက်တွေ့ပြုပြင်ခြင်း မှတ်တမ်းများ
စာအုပ်ပါ။ အတော့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ မိမိဘာသာ
Name : Teach Yourself The Best Technology and Repairing PCs
Author : ဦးအေးကိုကို
Advanced Registry Doctor Professional v9.3.6.2 Multilingual Cracked
Posted by ZawKhar On0comments
If you wish to clean up your registry to make it quicker, fixarecurring error or broken link, or catch early signs of severeproblems, registry repair software is for you. Advanced Registry Doctor offers one-click solutions which reveal its user-friendly format.
Posted by ZawKhar On Sunday, July 25, 20100comments
Posted by ZawKhar On Saturday, July 24, 20100comments
ဘာမျှ မဟုတ်ပါလား ” လို့
“ ဘာမျှမဟုတ်တဲ့သဘော” ကို
Posted by ZawKhar On Friday, July 23, 20100comments
Labels: Player Software
Advanced SystemCare Pro v3.6.1.712 + keygen
Posted by ZawKhar On Thursday, July 22, 20100comments
* Microsoft? Windows?7(32-bit and 64-bit) Starter/ Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
* Microsoft? Windows? Vista (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/Home Premium/Business /Ultimate
* Microsoft? Windows? XP (32-bit and 64-bit) with SP2/SP3 or Home/Professional/Media Center
* Microsoft? Windows? 2000 (32-bit and 64-bit)
Easy Mp3 Downloader v4.2.1.6 + RUS | 8.3 MB
Labels: Downloading Software
No limitations (FULL!)
Proof Working On Windows 7
Posted by ZawKhar On Wednesday, July 21, 20100comments
RAT ဆိုသည်မှာ malware ပရိုဂရမ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို
ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကွယ်ကနေ တိုက်ခိုက်မှုလိုအရာတွေ ၀င်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် တံခါး
ဖွင့်ပေးတဲ့ ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းတွေလို download လုပ်ယူရတဲ့အရာတွေနဲ့ email attachment အရာတွေကနေ
၀င်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ RAT တွေဟာခြေကုတ်ယူထားတဲ့ ကွန်ပျူတာမှ အခြားသော အားနည်းချို့ယွင်း
ချက်ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကိုကူးဆက်ပြီး botnet ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
RAT ဖြင့် administrative ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စများကို ထိန်းချုပ်ပြီးနောက် ထိန်းချုပ်ထားသူမှ
တိုက်ခိုက်လိုသည့် ကွန်ပျူတာကိုဖော်ပြပါကိစ္စများဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
- Keylogger များ သို့မဟုတ် အခြားသော spyware များဖြင့်သုံးစွဲသူကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
- လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို လက်ခံရယူခြင်း။
- webcam မှ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများရယူခြင်း။
- screenshot များ ပြုလုပ်ရယူခြင်း။
- virus များအခြားသော malware များကိုထည့်သွင်းခြင်း။
- ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်စနစ်များကို download ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ပစ်ခြင်း။
RAT ရဲ့လူသိထင်ရှားကျော်ကြားသော ဥပမာတစ်ခုကတော့ Back Orifice rootkit ဖြစ်ပါတယ်။
Back Orifice rootkit ဟာ ဟက်ကာအုပ်စုတစ်ခုမှ Microsoft ရဲ့ Windows Operation Systems ကို
လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ရေးဆွဲးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
RAT တွေဟာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့အလုပ်လုပ်နေတာကို
ဖော်ပြထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တရားဝင်ပရိုဂရမ်တွေ လုပ်ဆောင်သလိုပဲ
လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ၀င်ရောက်စီးနင်းထားသူဟာသုံးစွဲတဲ့ရင်းမြစ်တွေကို ရယူထားတဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်
နိုင်စွမ်းကျဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုသုံးစွဲနေတာကိုလည်း ကွန်ပျူတာရှိ ပိုင်ဆိုင်သူကမသိရှိနိုင်ပါဘူး။
RAT တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကတော့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ရယူသုံးစွဲထားခြင်း၊
ယုံကြည်လို့မရတဲ့ ရင်းမြစ်မှ download လုပ်ယူမှုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ attachement တွေကိုမသိရှိတဲ့
ရင်းမြစ်တွေကနေ ပို့ဆောင်တဲ့အခါ ဖွင့်မကြည့်ခြင်းနှင့် Link များကို သေချာစွာမသိဘဲ click
မခေါက်ခြင်း အစရှိသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်ဇော်၊ Myanmar Internet Journal ၊ ဇူလိုင် (၂၂) ရက်၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်။
MGY.exe ဗိုင်းရပ်စ်ကို MAGWAY FC virus cleaner ဖြင့် အလွယ်တကူရှင်းနိုင်
Posted by ZawKhar On Tuesday, July 20, 20100comments
ယခုလ (၁) ရက်နေ့ခန့်မှစပြီး ယခင်ထက် ပျံ့နှံ့ဖျက်ဆီးမှုပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် MGY.exe ဗိုင်းရပ်စ်ကို
MAGWAY FC virus cleaner ဖြင့် အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း OK virus cleaner အဖွဲ့၏
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်ပါက Windows ရှိ Start Bar အပေါ်ဘက်တွင် MAGWAY FC
ဆိုသည့် logo တစ်ခုပေါ်မည်ဖြစ်ပြီး ဖိုင် icon များနှင့် ဖိုင်၏အရွယ်အစားများကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်
“ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်ကျော်လောက်မှာ တော်တော်လေးပိုဆိုးလာပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်
၀င်တယ်ဆိုတာနဲ့ start bar အပေါ်မှာ MAGWAY FC ဆိုပြီး logo တစ်ခုပေါ်နေမှာပါ။ နောက်ပြီး
file icon တွေကိုလည်း MAGWAY FC ဆိုပြီး ဘောလုံးပုံစံလေးပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က
စက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျောက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဖိုင်တွေရှိတဲ့ folder တွေကအလွတ်အတိုင်းပဲ
မြင်ရတော့တယ်။ နော်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ အဲဒီဗီုင်းရပ်စ်က ဖျောက်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကို သူရဲ့ extension နဲ့
ပြန်ဖော်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုပြန်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ဖိုင်ရဲ့အရွယ်အစားအားလုံးကို 50MB အရွယ်အစား
အတိုင်း အကုန်လုံးပြောင်းပြီး ပြန်ဖော်ပေးတာပါ။ ”
“ အဲလို နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုရင် ဖိုင်တွေကို recovery တောင် ပြန်လုပ်ဖို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့
ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ဝင်တာကို သိသိခြင်းရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲ ဆက်ပြီး
ကွန်ပျူတာကိုသုံးနေမယ်ဆိုရင် ၂ နာရီ ၃ နာရီအတွင်းပျက်စီအောင်းဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ OK virus cleaner ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် http://okviruscleaner.ning.com/
မှာ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို MAGWAY FC virus cleaner အသုံးပြုရှင်းလင်းပုံရေးသားပေးထားပါတယ်။
သာမာန်ကွန်ပျူတာ user တွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူ download လုပ်ပြီး ရှင်လင်းနိုင်ပါတယ်။ ”
ဟု OK virus cleaner အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုစိုးမင်းသူမှ အင်တာနက်ဂျာနယ်သို့ပြောသည်။
အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန် USB Disk Security Version 5.3 ကို မိမိတို့၏
ကွန်ပျူတာတွင် ထည့်ထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
Myanmar Internet Journal ဇူလိုင် (၂၂) ရက်၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်
Theme World Cup Windows 7
Posted by ZawKhar On Sunday, July 18, 20100comments
Posted by ZawKhar On Saturday, July 17, 20100comments
K-Lite Codec Full Pack 6.0.4
Posted by ZawKhar On Friday, July 16, 20100comments
Version: 5.0.375.70 Final
Posted by ZawKhar On Saturday, July 10, 20100comments
Cool Screen Capture - This program allows users to create screenshots of their desktop. This professional tool allows the user to easily intuitively understood interface programmy.Vy can create screenshots of your desktop, video files and other necessities for you veschey.
All Games Cracks & Activators
All Games Cracks & Activators mainlyacompilation of all patch and keygen released. The activators mainly eliminate the trial period of the game and changing it to full version. The activators included can be used to activate games from most of the games publishers.
This compilation of activators isamust-have handy tool for game lovers! Getagame (trial version) from any of the publisher and use this tool to make it full version...
*Lolo.ru & Mail.ru Games
*Real Arcade Games
*Reflexive Arcade Games
Download All Games Cracks & Activators
3 Million Serial Keys For All Games And Softwares (Latest)
Download3Million Serial Keys For All Games And Softwares (Latest)
Avira AntiVir Premium and Security Suite +4Year ...
Advanced Registry Doctor Professional v9.3.6.2 Mul...
MGY.exe ဗိုင်းရပ်စ်ကို MAGWAY FC virus cleaner ဖြင...
3 Million Serial Keys For All Games And Softwares ...